Wararkii ugu Dambeeyay Duqeyn ka dhacday Gedo – XAMAR POST
Wararkii ugu Dambeeyay Duqeyn ka dhacday Gedo
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Duqeyn Diyaaradeed oo ka dhacday degaano hoosyimaada degmada Beled-xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo, sida ay sheegeen masuuliyiinta gobolka Gedo.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-qaadi ayaa sheegay Duqeyntan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Shabaab in ay si gaar ah uga dhacday degaano ay ka mid yihiin Qabar-sheeq iyo Bur-sagaar.
Wuxuu sheegay Guddoomiyaha Duqeyntan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay Dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab, loogana gubay ila Saddex gaari oo ay lahaayeen.
Guddoomiye Al-qaadi ayaa sidoo kale sheegay Duqeyntan in ay fuliyeen Diyaarado laga leeyahay dalka Kenya, hadana ay ku guda jiraan baaritaanada la xiriira khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyo magacyada xubnaha lagu dilay.
“Duqeymaha waxay ka dhaceen degaano degmada hoosyimaada, Dowladda aan deriska nahay Diyaarado ay leeyihiin baa lagu duqeeyay xubno ka tirsan Shabaab, dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu gaarsiiyay, dib ayaan ka faah faahin doonaa khasaaraha rasmiga ah.” Ayuu yiri Guddoomiye Al-qaadi.
Ururka Al-shabaab ayaa waaberigii shalay waxa ay weerar ku bilowday qarax ku qaadeen fariisin Ciidamo ka tirsan Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka degmada Beled-xaawo, khasaare kala duwan ayaana ka dhashay weerarkaasi, oo socday mudo saacado ah.
Nin la Raadinayay oo lagu Qabtay Magaalada Qardho
Khilaaf soo kala dhex galay Somaliland iyo Sharikadda DPWorld